Masks ngobuso kunye ne-aspirin
Namhlanje, kukho ezininzi zokupheka iimaski, ezinokulungiswa ekhaya. Ubuncedo beemaski ezinjalo kukuba basebenzisa izithako zendalo kuphela, ezinomphumela omuhle kwesikhumba.
Kule nqaku siza kukuxelela malunga neenzuzo zesiqhelo samagqabi ase-aspirinad, kwaye wabelane ngokupheka ngamaski asekelwe kwi-aspirin. Ezi maski zihlambulule kakuhle ulusu kwaye lihlaziye. Ngenxa yezibonelelo zayo ezichasayo, i-tryptophan inceda ukulahla i-acne nokuvuvukala kwesikhumba. Ngokusetyenziswa ngokuqhelekileyo, ii-pores zibe zincinci, i-fatty sheer iyalala, kwaye ulusu luba lutsha.
Kuthetha nge-aspirin kunconywa kubanikazi besikhumba esinamafutha okanye ingxaki nge-acne. Le ngxaki idla ngokukhawuleza. Ukongeza kwiipropati ezichasayo, i-aspirin inefuthe lokunyusa. Ndiyabulela iimaski kunye nokusetyenziswa kwayo, unokukrazula ukucaphukisa, ubomvu nokucaphuka.
Ukulungiselela iimaski, kucetyiswa ukuba isebenzise iipilisi ezingabambathwanga. Kodwa kukho ukuphikisana nokusetyenziswa kwesi sigulo. Akunconywa ukunyamezela komntu ngamnye, kuba i-allergies ingenzeka. Kwakhona, ayikwazi ukusetyenziswa ngabasetyhini abakhulelweyo nabaqhawulayo. Ngeempahla ezihlanjululwayo, akunjalo ukuhlakanipha ukwenza iiski nge-aspirin.
Masks ebusweni ngesiseko se-aspirin
I-skrab ye-Mask yesikhumba esinamafutha kunye kunye
Ukulungiselela loo maski, uya kuyidinga isipuni samanzi, i-teaspoon yeoli ye-sunflower (ungasebenzisa nayiphi na enye ukutya efanelwe uhlobo lwakho lolusu), ubusi obancinci kunye neepilisi ezine ze-asparagus. Okokuqala, nqabisa iipilisi ze-aspirin, uze ungeze amanzi kunye neoli kunye nobusi kubo. Hlanganisa yonke into kwaye usebenzise ebusweni. Emva kwemizuzu eyi-10 imaski iyahlanjwa.
Ukuhlanjululwa kweMask kwanaluphi na uhlobo lwesikhumba
Uya kufuneka ezi zinto zilandelayo: itafile yetafile yobusi obufudumeleyo, iipilisi ezimbini ze-aspirin, i-spoonful spoonful yeoli joba. Yongeza ioli kwi-honey uze ubeke umxube kwindawo yokuhlambela amanzi. Emva koko faka i-aspirin, ngaphambili. Ubushushu bobusuku abufanele kudlule ama-degrees angama-40, njengokuba ubusi busenokulahlekelwa yimpahla yakhe yokuphilisa. Ngaphambi kokuba ufake i-mask, kucetyiswa ukuba uqhube isikhumba, kwaye usebenzise isitshizi ukuvula kangcono ukuvula ii-pores. Emva koko, sebenzisa imaski ebusweni bakho kwinqanaba elifanayo imizuzu engaphezu kwamashumi amabini. Sebenzisa le mask icetyiswa kanye ngeveki.
Umaski wokucoca ngokucokisekileyo ukudibanisa kunye nesikhumba seoli
Ukwenza imaski enjalo, kufuneka uthabathe itafile zamanzi kunye neepilisi ezine ze-aspirin. I-Aspirin ixutywe kwaye ixutywe ngamanzi. Emva koko wongeza ioli (iziqhamo okanye imifuno) kunye nobusi obancinci kumxube. Ukuba unesikhumba esinamafutha, akudingeki ukuba ungeze ioli. Faka isicelo semaski imizuzu eyi-10, uze ususe.
Le maski kunye nokusetyenziswa ngokuqhelekileyo kungekhona nje ukuhlanjululwa kwesikhumba, kodwa iphinda iphelise iimpazamo ezincinane kunye nokuvutha. Ukuba unobungozi obusika, ungayisebenzisi.
Ubuso obumhlophe, obunceda ukurhoxisa amnyama kunye ne-acne
Thatha iipunipoyi ezimbini ze-lemon juice esandula ngokucoca kwaye udibanise ngamacwecwe amathandathu e-aspirin. Umxube obangelwayo usetyenziswa ebusweni imizuzu eyi-10. Kubalulekile ukuhlamba isiskiti kunye nesisombululo soda, kwaye kungekhona ngamanzi. Ukwenza isisombululo sesoda, qhafaza isipuni se-soda kwisitha samanzi. Emva kwezinto ezimbalwa zezicelo ezikule ndawo, isikhumba sakho siya kuhlaziya, ukucoceka, ukuvutha kunye ne-acne kuya kunyamalala.
Umaski kunye ne-aspirin yoluhlobo lwesikhumba oluqhelekileyo
Ukulungiselela loo maski, thatha iipuni ezimbini ze-yogurt kunye namacwecwe amabini e-aspirin. Gxotha yonke into kwaye usebenzise ebusweni isigqi seyure. I-mask enjalo inokwenziwa ngosuku kwaye emva kwesicelo sokuqala uza kubona isiphumo esihle: ubomvu obuncinane buya kulala, i-pores encinci, ulusu luya kuba lucacile kwaye luhlambuluke. I-Aspirin iya kuba nefuthe lokuxhatshazwa kwesikhumba, i-Akefir izalise isikhumba ngamavithamini kwaye ityebe. Ukuba awunayo i-kefir esesandleni, ungasebenzisa i-yogurt elula ngaphandle kwezithako endaweni yoko.
Umaski wesikhumba esinzima kakhulu
Ukuba uye wazama ezininzi izixhobo ngokubhekiselele kwiinkqubo ezivuthayo zesikhumba, kodwa akukho nto ikuncede, zama le maski. Iipilisi zeRazumnitev ziipilisi ezimbini ze-aspirin, zongeza kubo isipuni se-water peel. Faka isicelo semaski kwiindawo eziyingxaki ebusweni malunga nesigamu seyure uze uhlanza phantsi kwamanzi afudumele. Ukufezekisa iziphumo ezilungileyo, yenza le maski ngokuphindwe kabini.
Tonic esekelwe kwi-aspirin
Ukwandisa isenzo samaski nge-aspirin, lungiselela i-ascendant ngale nto. Ukwenza oku, thatha isipuni sesipuni se-apple cider, iipunipoli ezisibhozo zamanzi amaminerali, iipilisi ezinhlanu ze-aspirin. Yonke ingxube kunye nesisombululo esiphumela, susa ubuso ngobomi, uhlawule ingqalelo kwiindawo eziyingxaki. Ukuba unesikhumba esikhathazekile, ke le toni ayilungile. Ngokusetyenziswa rhoqo kwesi sixhobo, isikhumba sakho siya kuba sempilweni.
Mask-scrub nge aspirin, ubusi kunye nolwandle ityuwa
Ukulungiselela le maski, thatha i-30 g yolwandle ityuwa, itiye yokulala ubusi kunye namacwecwe amabini e-aspirin. I-Aspirin i-pulverized and mixed mix with other ingredients. Faka isicelo semaski ngokunyakaza okufakela ukusila, njenge-scrub. Ukuhlamba ubuso ubuso bemizuzu embalwa, uze uhlambe ngamanzi apholileyo.
Imaski echasene nokuvuvukala esekelwe kwi-aspirin nodongwe
Ukulungiselela le masksi, thabatha itaspoon yodongwe olumhlophe uze udibanise kunye namacwecwe amabili e-aspirin. Dlulisa umxube obangelwayo ngamanzi amachiza afudumele kwaye uhlambe ukuhambelana okukhulu. I-mask ifanele isetyenziswe kwisikhumba esiluhlambulukileyo kunye ne-disinfected of the face. Kwimizuzu elishumi kufuneka ihlanjwe.
Izixhobo zokusetyenziswa kweemaski ngobuso ngesiseko se-aspirin
Ukulungiselela i-antiseptic, qhawula iipilisi ze-aspirin emanzini ahlambulukileyo uze usebenzise isisombululo sokusula ulusu. Ukufumana iimaski kunye ne-aspirin, unokukhetha nayiphi na into efanelekileyo yesikhumba sakho. Kungcono ukudibanisa kunye neziqhamo ze-aspirin kunye neoli yemifuno, kunye nobusi kunye ne-aple cider viniga.
Imaski echazwe kweli nqaku ayigcini nje ukucocekisa isikhumba, kodwa iphinde ibe yinto yokukhangela. Ukuze ungalimazi ulusu, lufihliwe ukuba lubambe ngokukhawuleza njengoko kubonisiwe. Ukuba uvakalelwa ukutshisa okanye ezinye iimvakalelo ezingathandekiyo, khawuleza uhlambe i-mask ebusweni bakho.
Kubalulekile ukwazi ukuba iimaski ezisekelwe kwi-aspirin azifanelekanga. Akunakusetyenziswa ngabantu abanokungaxhaswa komntu kule nkunkuma. Iimaski ezinjalo azikwazi ukusetyenziswa rhoqo, njengoko zingakhokelela ekumanyeni nasekukhungeni kwesikhumba, kwaye oku kusebenza kuzo zonke iintlobo zesikhumba. Kwakhona, ukusetyenziswa rhoqo kweemaski kungakhokelela ekuperozu-ukubonakala kweenethiwekhi ze-vascular ebusweni.
Iimaski zomntu ngesiseko se-aspirin kufuneka zisetyenziswe kuphela kusihlwa ngaphambi kokulala. Emva kokusetyenziswa kwabo, kucetyiswa ukuba ugweme ukukhanya kwelanga ngokukhawuleza kwesikhumba ukuphepha ukutshisa. Ukuba oku kungenakuphetshwa, sebenzisa i-sunscreens enezinga eliphezulu lokukhusela.
I-Tree Tree Oil kwi-Acne
Indlela yokukhawuleza ukulahla i-acne
Uhlobo lwe-Pop no-Andy Warhol kwiphephaniselo elincinci I-2015
Ukunyamekela ngokufanelekileyo izixhobo zasekhishini
I-massage yase Tai
Isaladi "Iikhabhiji ezintathu"
Ukufunda ukwenza i-massage enobuchopho kumfazi okanye indoda
Indlela yokukhetha iphepha lodonga elifanelekileyo: 4 iingcebiso ezibalulekileyo
Ucinga ukuba unomntwana oneminyaka elingakanani?
UTina Kandelaki ukhangele iindawo zokuthandana
Ukudala: UFebhuwari uNeil Trends